Batisa ny sabata 12 novambra 2011 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Pasteur Mailhol sakaizan’ny fanatanjahan-tena
2013 tsy tanteraka….??? Ireo tsara ho fantatra
Ireo Vaovao Vaovao Samihafa
Batisa ny sabata 12 novambra 2011
13 novembre 2011 admin batisa
Ny Sabata faha 12 Novambra 2011 lasa teo no notanterahina tetsy Andranotapahina Ambohidratrimo ny batisa lehibe izay niarahana tamin’ny Fiangonana Apokalypsy rezionaly Antananarivo notarihin’ny Pasitera Mailhol.
Tao aorian’ny kaoferansa izay niarahana tamin’ny pasitera Mailhol dia maro be ireo resy lahatra ka 300 no nanolo-tena tamin’ny ranon’ny batisa ny Sabata 12 novambra 2011 lasa teo. Mialohan’ny nirosoana tamin’izay batisa izay anefa dia nizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ireo vahoakan’Andriamanitra tonga teny an-toerana i Pasitera Mailhol.
Ny fotoana tapany hariva no niroso tamin’ny batisa ka ireo misionera sy evanjelisitra tonga teny an-toerana no nanatontosa izany. Nisy ihany koa ny fitsofan-drano ny zaza tao aorian’izay. Ankoatr’izay dia nizara ny fahefana ho an’ireo vao vita batisa ihany koa ny pasitera Mailhol. Ny antony moa dia ny ahazoan’ny tsirairay miasa na aiza na aiza no toerana misy azy ireo: mametra-tanana amin’ny marary, mandroaka devoly sns…
Apokalypsy ao amin’ny Radio Fanambarana
Ny Alahady 20 Novambra 2011 ho avy izao dia handeha ao amin’ny radio Fanambarana FM 98.4 Mhz ny fampianarana ny boky Apokalypsy, izay iarahana amin’ny pasitera Mailhol. Fampianarana ahafantarana ny zava-miafina rehetra ao amin’ity boky farany ao amin’ny Baiboly ity. Ahitana ny tantaran’ny fiangonana, fanazavana ny amin’ny isa 666, sns…
← Fiharovana mafy
Fampianarana Apokalypsy →
Copyright © 2018 Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany. Tous droits réservés.